Sentinel Lobby 3 ndiyo yechitatu yekupedzisira addon ye ►Lobby Miner, yekutanga roulette software iyo inokutendera iwe kuongorora munguva chaiyo fino a 20 matafura paIndaneti.
Unoziva sei Sentinel Lobby ndeye trilogy yeiyo roulette software iyo inotora mukana wekutarisa kwematafura akaitwa na ►Lobby Miner kuyedza kuhwina nekutamba kana kupokana nematanho ari nyore maitiro (►Sentinel Lobby 1), pane nhamba imwe chete (►Sentinel Lobby 2).
Neichi chitsauko chekupedzisira, isu panzvimbo pezvo tine hanya nekuyedza kushandisa zvisina kufanira nhamba dzakanaka.
Kuti ushandise chirongwa ichi saka zvakafanira kuti watotenga iyo ► manyorerwoLobby Miner, pasina izvo hazvingakwanise kutora mukana weiyi software, kunze kwekunge iwe uine mamwe maturusi ekutora manhamba kubva patafura ye roulette uye wozvichengeta mune rimwe kana anopfuura mameseji faira.
Mashandiro anoita Lobby Sentinel 3
Sentinel Lobby 3 mukudzidzira inosungira mafaera akanyorwa panguva chaiyo na ►Lobby Miner uye inotsanangura huwandu hwenzvimbo dzakabatana kune kunonoka kwemapoka ane 1-2-3-4-5-6 manhamba.
MuLobby Sentinel 3 pfungwa yekunonoka yakagadziridzwa seinotevera: kutanga kubva kuzvipineti zvakanyorwa pamatafura akasiyana siyana, software inosanganisa manhamba maererano nenhamba dzayo uye inoapatsanura kuita mapoka matanhatu, akaumbwa nenhamba imwe kusvika kumatanhatu, i.e. iyo yakaderera frequency.
Panguva ino mamirioni ezvisaririra zvehurefu hwakaenzana nenhamba yezvipenga zvakanyorwa kusvika ipapo zvinoteedzerwa e Sentinel Lobby 3 inosimbisa, pahwaro hwemapoka akasarudzika, kunyangwe kuwanda kwenhamba dziri kubvunzwa kuri padyo nekuwedzera kana kwete.
Sezvauri kuona mumufananidzo, ini ndangosarudza mamwe chete matafura aripo, kunyanya kudzivirira matafura senge Mheni Roulette, Quantum Roulette, pamwe neese otomatiki ma roulettes, seizvo zvinobuda pamatafura aya hazviwanzoitika zvachose.
Chinhu chekutanga kuita kudzvanya pane bhatani Reload Roulette Matafura, nenzira iyi vanozoiswa mukati Sentinel Lobby 3 mafaera ese ematafura akasarudzika akasarudzika uye muchazoona kuti nhamba dzenhamba dzakanyorwa dzichaonekwawo (Spins ikholamu), Ipo ikholamu yekutanga (Roulette #) inongoshanda chete kuzivisa tafura ine nhamba inofambira mberi 01, 02, 03, nezvimwe.
Kana izvi zvangoitwa, isu tinogona kuongorora matafura akasiyana akabatanidzwa munzira mbiri dzakasiyana: kana zvese zvakateedzana nekudzvanya bhatani. Shandisa scan All Tables, kana imwe panguva imwe neimwe, nekudzvanya pane akasiyana mabhatani ane denderedzwa dzvuku.
Panguva ino zvinodikanwa kutora kumbomira kwakakodzera kuti utsanangure zvirinani kuti ndeapi mhando yehuwandu inoongororwa ne Sentinel Lobby 3.
Pandakatanga kutsanangura kare, Sentinel Lobby 3 kana kamwe chete matapiro ematafura akasiyana siyana akaiswa, pakarepo tanga kugadzira nhamba yekutanga, uchifananidza mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru (kukosha kwakaratidzwa mumunda Mimhanzi #) yekusarudzika kutenderera + 12 spin (kukosha kwakaratidzwa mumunda + Spins).
Semuenzaniso mune mufananidzo al Tafura 02 isu takanyoresa (nekuda kwe ►Lobby Miner) 373 kutenderera, saka Sentinel Lobby 3 ichaenzanisa mazana zviuru mazana maviri nemakumi mashanu ematanhatu ane mazana matatu nemakumi matatu nenomwe + gumi nemaviri = Zviuru zvinomwe.
Nenzira iyi, zviverengero zvinovhara huwandu hwakakura hwezvipinha pane izvo chaizvo zvakanyorwa, asi sekuziva kwako Lobby Miner zvinyorwa zviri paavhareji 6/7 manhamba kumashure kwenguva chaiyo, saka izvi zvichatibatsira kupindira munguva yakanaka mumashure kwete kupotsa mikana yese inobvira yekutamba.
Mushure meiyi ongororo yekutanga sezvaungaona pa Tafura 2 mu Limit column iwo mapoka akasimbiswa mune girini Kwakanaka4, Kwakanaka5 e Kwakanaka6, zvinorevei?
Zvinoreva kuti semuenzaniso paTafura 02 iyo 4 isinganyanyi kuverengwa manhamba (Kutonhorera 4) ine huwandu hwakazara (huwandu hwezvabuda) zvakaenzana ne17, nepo simulation ichiratidza kuti mune gumi nemaviri anotenderera nhamba iyi inofanira kunge iri "kanenge" zvakaenzana ne12.
Saka isu tine chiratidzo chekutanga kuti mune gumi nemaviri anotevera kanokwana nhamba imwe "inofanirwa" kuve imwe yechina inotonhorera (inotonhorera), kubvira ipapo mupaneru rinotevera isu tinowedzera nhamba dze12 / 4 dzatiri kushaya tichienzanisa nenguva chaiyo , vamwe chete vacharamba vari 6/7 kutenderera kuti iyo Rng simulator Statistic izadziswe (kana kwete).
Kana mushure mekutanga kuongorora kwese kwakanyorwa maspins isu tisingaone matafura anogona kutamba, tinogona zvakare kusarudza kuita scan nyowani chete ekupedzisira x anotenderera petafura.
Hazvisi zvisingazivikanwe zvachose kuti kana semuenzaniso pane mazana mana anotenderera patafura hapana zviratidzo, kusarudza sarudzo Last uye huwandu hwezvipenga zvekudzokorodza manhamba (ekupedzisira zana, 100, 150, nezvimwewo), iyo nyowani yekunyepedzera simulation inoratidza mikana yemitambo.
Kana tangowana iyo inogona kurwisa, tinogona kudzvanya bhatani neruvara rwegirinhi, rinozotiendesa takananga kuwindo rinotevera, rinova iro jira Kurwa neBhodi.
Tichingodzvanya pane rimwe bhatani riine denderedzwa regirini, iri panhi rinovhura, panotangisa nyowani Rng simulation, asi panguva ino pamamirioni mazana maviri nezviuru (munda Mimhanzi #) inoumbwa nenhamba yemasipisi yakanyoreswa patafura iyoyo, pamwe nematanho matanhatu (Campo + Spins), iyo inoshanda sepakutanga kuwedzera matanhatu maspineti kune zvidimbu kuti zvifananidzwe, chaizvo nekuti ipapo tichafanira kuwedzera nezve 6/6 chaiyo spins kana tasarudza kunyatso kuvhura iyo tafura.
Ini ndinotaura izvi nekuti hazvizove zvisina kujairika kuti mushure mekusarudza tafura mune yepamberi pani, iyo nyowani uye zvakanyatsojeka kuenzanisa kwemamirioni maviri nehafu emamiriyoni hakuratidzi mukana wekutakura kurwisa (semuenzaniso mumufananidzo uri pamusoro pamusoro pemapoka eanhamba asingasviki matanhatu, hushoma huwandu hwakawanikwa huchiita makumi maviri nematatu, zvakaenzana neiyo shoma frequency yakanyorwa neiyo simulator inowedzera iwo mamwe matanhatu ekuwedzera).
Kana, kune rimwe divi, mushure mekuyedza bvunzo, mikana yemutambo inosimbiswa senge iri mumufananidzo (zvese zviri paboka rakaumbwa #5 izvo zvinopa #6 numbers), ipapo unofanira kubva wazarura tafura yemutambo (Turkish Roulette mune yedu muenzaniso) uye wedzera kune chaicho chinogadzikana manhamba e6 / 7 ari kushaika kubva mukusingaperi kwaunoona mukoramu pazasi zero pane repamusoro pani.
Mumufananidzo, manhamba ekupedzisira asara patafura ari 2 achiteverwa na1, kana kubva munhoroondo yetafura tichiona kuti vamwe havasi, wobva wangobaya pane inoenderana nhamba yaunoona pane panhivi pamusoro pegirafu uye izvi zvichave otomatiki akawedzerwa kukoramu yekusingaperi.
Kana nemukana tikakanganisa kudzvanya iyo nhamba, tinya kaviri panhamba isiriyo mukoramu uye ichabviswa.
Paunenge uchinge wagadzirisa zvese zvipineti, unofanirwa assolutamente Dhinda bhatani RNG Refresh, izvo zvinonyanya kudzokorora kumwe kuenzanisa kwemamirioni maviri nemazana maviri ezviuru (+ 2,5 mamwe ma spins).
Kana kunyangwe mushure meiyi bvunzo yekupedzisira ichiri kuratidza mune green mukana wekutamba, zvino zvinofungidzirwa kuti mukati memakumi matanhatu anotenderera kanokwana imwe pamashanu kana matanhatu asingasviki manhamba anogona kunyatso kubuda.
Sentinel Lobby 3 zvakakosha mubhuruu nhamba dzisinganyanyi kuwanda, izvo dzimwe nguva zvinogona kutodarika zvitanhatu, izvi zvinodaro kana, sekumufananidzo, paine kana manhamba mashanu ane frequency ye6, isu tinofanirwa kusarudza zvekuita, mune iyi nyaya ini ndinongotamba manhamba ne kuwanda kwe 5-5-2, inova makumi matatu nematatu, makumi maviri nemaviri, gumi nemaviri, nemakumi matatu nenomwe, yenhamba dzose dziri ina e kweanosvika matanhatu ekuruka.
Kana zvinosuwisa kuti imwe yenhamba ine frequency ye5 inobuda ipapo ipapo ini ndinomira ndodzokera kunotsvaga mumwe mukana wemutambo mupaneru Kudzora Kamuri.
Kana usina chokwadi nezve ►YouTube kuwanikwa mavhidhiyo anoratidza zvakajeka kuti ma Sentinel Lobby 3, sezvauchaona, kuvhima mikana yemitambo kunofanirwa kuitwa zvese pazvipenga zvese uye pane yekupedzisira x spins uye mamiriro emitambo haasi kushayikwa, chinhu chakakosha sekugara kugadzirisa sitopu usati watanga kutamba (Zvikamu 50/100 pachikamu / zuva), asi pamusoro pezvose usambofa wakabheja pamusoro pe6 kupota pakurwiswa, nekuti huwandu hwakavakirwa pane iyo chaiyo nhamba yezvipenga uye kwete zvekare.
Ini kazhinji pane kwekutanga kupfura ndakakunda ini zvakare kuyedza imwe yekuenderera, kana ndikakunda ok uye ndoedza zvakare, zvikasadaro ini ndinobva ndadzokera kudare repamusoro kunotsvaga mimwe mikana yemutambo.
Kana iwe ukaona kuti PC yako inotora nguva yakareba yekugadzirisa zvisina tsarukano, unogona zvakare kudzikisira zvakasarudzika tsika (250.000 muDare reKamuri reKudzora uye 2.500.000 muFight Board) woisa semuenzaniso 150.000 mune yekutanga uye 1.500.000 mune yechipiri , izvi zvinoenderana newe, ita bvunzo wobva wafunga, chakakosha ndechekuchengetedza huwandu hwespins dzekuwedzera kumatranches, ari gumi nemaviri muchikamu chekutanga uye 12 mune yechipiri.